Wararka Maanta: Arbaco, Jan 2 , 2013-Qof lagu dilay Suuqa Dharka ee Kismaayo iyo Qaar ka mid ah Ganacsatada oo lagu Amray inay halkaas ka guuraan
Warar kala duwan ayaa kasoo baxaya dilka ninkani rayidka ah, warar ayaa sheegaya in ay dileen kooxo hubeysan halka warar kalena ay sheegayaan in ay xabad uga fakatay ciidamo katirsan kuwa dowladda.
Ciidamada dowladda ayaa dilka kadib goobtaasi ka sameeyay howlgallo ballaaran oo ay qabqabteen dad looga shakisanyahay in ay ka danbeeyaan dilkaasi.
Dhinaca kale Maamulka KMG ee magaalada Kismaayo ayaa amar ku siiyay ganacsatada loo yaqaan waratada ee dharka ku iibisa hareeraha wadooyinka in ay isaga guuraan halkaasi.
Afhayeenka dhaqdhaqaaqa Raaskaambooni Sheekh C/naasir Seeraar oo warbaahinta lahadlay ayaa sheegay in waratada dharka ku iibisa suuqa weyn ee Balcadka ay ciriiri ka dhigeen wadooyinka islamarkaasina ay suurogal tahay buu yiri in lagu soo dhex dhuunto oo ay halkaasi ka dhacaan falal amni darro.
Ganacsatada waratada loo yaqaan ee dharka iibisa ayaa lagu amray in ay u guuraan suuqweynihii hore oo ku yaal xaafadda Calanleey, kaasoo ay hore dayactir ugu sameeyeen maamulkii xarakada Al-shabaab ee ka arimin jiray magaalada Kismaayo, wallow aysan jirin dhaqdhaqaaq ganacsi oo xooggan oo suuqaasi ka jira marka laga reebo qeybaha Kalluunka lagu iibiyo.
Ganacsatada dharka ku iibisa hareeraha wadooyinka (waratada) ayaa ku ganacsada afaafka hore ee bakhaaraha waaweyn ee ku yaal suuqa weyn ee balcadka ilaa agagaarka dahablaha, waxaana wadadaasi ka jira ciriiri aad u weyn iyadoona ay adagtahay in ay isticmaalaan dadka iyo gaadiidka, maadaama dhar fara badan uu daadsanyahay hareeraha wadooyinkaasi.